'सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ऋण लिन्छ'
‘सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ऋण लिन्छ’
काठमाडौँ, २९ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा ऋण वैदेशिक लिने बताएका छन् ।
उनले विकासको कुरा गर्दा वातावरण क्षय र लापरवाहीको प्रश्न सधैँ देखिए पनि नेपाल यसप्रति सचेत भएको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रमको आरम्भमा नवीनसिंह खड्काको सगरमाथा चढ्न जाने यात्रुको लामो लाममा आरोहीले घण्टौँ पर्खनुपर्ने अवस्थाको प्रस्तुति थियो । यस वर्ष ११ आरोहीको मृत्यु भएको समाचारमा देखाइएको थियो । प्रस्तुतिमा एक आरोही अलन आर्नेटले सगरमाथामा यस वर्षको घातक अवस्थाका तीन कारण – सीमित उपयुक्त मौसम दिन, बढी अनुमति तथा बजार प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको न्यूनमूल्य रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा अनावश्यक हल्ला चलेको बताउँदै त्यत्ति धेरै अनुमति नदिइएको स्पष्ट गरे ।
‘‘आरोहीले राम्रो मौसमका लागि कुरे । कहिलेकाहीँ उनीहरुले धेरै दिन कुर्नुपर्छ । यसमा पुनःविचार गर्नु आवश्यक छ । हल्ला गरिएझैँ जटिल अवस्था होइन’’, उनले भने ।
आगामी दिनमा आरोहीलाई अनुमति दिँदा र सम्बन्धित अधिकृतका विषयमा पनि ध्यान दिइने बताउँदै उहाँले यातायात अवरुद्ध भएकैले आरोहीको मृत्यु भएको कुरा साँचो नभएको स्पष्ट गरे । “हामीले केही नियममा संशोधन गरेका छौँ । पथप्रदर्शकको सङ्ख्या, अक्सिजन सिलिण्डरको सङ्ख्या, तयारी आवश्यकता, आरोहणको उचित सङ्ख्या आदिका विषयमा हामीले संशोधन गरेका छौँ’’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । (रासस)
आधा गिलास खाली नभरी संविधानको सर्वस्वीकार्य हुँदैनः डा. भट्टराई
देउवाको चेतावनी- संविधानको भावनाविपरितका कुनै पनि विधेयक मान्य हुँदैन
सिटौलाको आग्रह- संविधानको आलोचना मात्रै नगर्नुहोस्
संविधान दिवसः सर्वसाधारणलाई आकाशको फल, आँखा तरी मर
टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा यसरी मनाइयो संविधान दिवस (फोटो फिचर)
देशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना
युरोपा लिगः १० जनामा सिमित फ्रांकफर्टले आर्सनललाई रोक्न सकेन
युरोपा लिग: स्पेनिस क्लब सेभियाको सहज जित
राप्रपाद्वारा विभाग प्रमुख चयन, कसलाई कुन विभागको जिम्मेवारी ?
यि हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका २६ निर्णयहरु
सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले अबदेखि स्वदेशी कपडा लगाउनु पर्ने
भिभिआइपीले चढ्ने डेढ अर्बको हेलिकप्टर काठमाडौं आइपुग्यो, यस्ता छन् विशेषता